Video-ga fikradda ah iPhone 12 Pro Max | Wararka IPhone
Hasan Kaymak, waa kanaalka aad ku arki karto fiidiyowgan iyada oo loo malaynayo nashqada soo socota ee iPhone 12 Pro Max ee lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo warar xan badan oo durba ku sii qulqulaya shabakadda taasna waxay naga dhigaysaa inaan aad ula yaabno natiijada ugu dambeysa. Xaaladdan oo kale waa run in qof kastaa ka hadlo a iPhone 12 Pro Max oo leh naqshad la mid ah iPhone 4 ama 5, marka qaabkan ayaa ku saleysan.
Shaki la’aan muhiimadu waa in si dagan loo qaato wararkaas xanta ah, daadinta iyo naqshadahan, waa inaanan ku mashquulin waxa aan hada aragno maadaama aan wax yar gaari doonno. Waxaan sidoo kale leenahay bilooyin badan oo xan, xoqitaan, naqshado suuragal ah, turjumaad iyo fikrado sidan oo kale ah, sidaas darteed nabada maskaxda. Marka hore qaabkani waa mid cajiib ah markaa aan iska hubino.
Halkan waxaan uga tagaynaa fiidiyaha aan qashin lahayn tan iyo muujinaysaa xitaa qaybaha gudaha qaab qaabaysan, iyo sidoo kale jab cusub oo iPhones cusubi hubaal ku qaadan doonaan gudaha:
Batariga 6.000 mAh, A14 Bionic, kamaradda seddexaad ee la mid ah tan moodooyinka hadda jira ama kuwa loo maleynayo 8 GB ee RAM waa qaar ka mid ah faahfaahinta fikradan. Naqshaddan noocan ah ee uu abuuray Kaymak waxaa laga yaabaa inaysan rafcaan u helin qof walba, laakiin iPhone-ka oo u muuqda casaan dhamaadka fiidiyowgaan waa hubaal inuu helayo taageerayaal badan. Ma dhahayno kani wuxuu noqonayaa nooca cusub ee iPhone-ka ee sanadka 2020, waa fikrad xiiso leh iyo in lagu sameeyay iyadoo lagu saleynayo wararka xanta ah ee ay tahay inaan shukaansano, marka aan iska fududeyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Video-ka fikradda ah iPhone 12 Pro Max
Beats Solo Pro, sameecadaha dhagaha ka joojiya Apple ee cusub